Ozi niile nke iOS 11, tvOS 11, watchOS 4 na macOS High Sierra | Akụkọ akụrụngwa
Ignacio Sala | | Mobiles, software
Dịka anyị kwuputara na Fraịde gara aga, ụnyaahụ Mọnde, Juun 5, Apple gosipụtara iwu niile nke ga-abịa site na sistemụ arụmọrụ ya n'oge mgbụsị akwụkwọ, ma eleghị anya na njikọ na mwepụta nke iPhone 8, ma ọ bụ ihe ọ bụla ha mechara kpebie ịkpọ ya. Mana na isi okwu ngosi a, ọ bụghị naanị na anyị nwere ike ịhụ ụfọdụ akụkọ na sistemụ arụmọrụ nke usoro okike Apple, kamakwa ụlọ ọrụ nke Cupertino na-egosi HomePod, ihe ọzọ na Google Home na Amazon Alexa, na iMac Pro, a anụ ọhịa na arụmọrụ na mmeghari ohuru nke MacBook Pro nke na-adighi na ahia ruo otu afọ. Ma, ihe nwere ike ịmasị gị bụ akụkọ ndị ga-esi n'aka iOS 11 na ịkwanyere Apple sistemụ arụmọrụ, yabụ ka anyị banye n'ọgba aghara.
1 Gịnị bụ ihe ọhụrụ na iOS 11
1.1 Ogwe njikwa
1.3 Otu aka keyboard
1.4 Nseta ihuenyo
1.5 Apple Pay na ngwa ozi
1.8 Eziokwu mejupụtara
2 Gịnị bụ ihe ọhụrụ na iOS nanị iPad
3 Kedu ihe ọhụụ na watchOS 4
4 Ihe dị ọhụrụ na tvOS 11
5 Kedu ihe dị ọhụrụ na macOS 10.13 High Sierra
5.1 APFS - Usoro Apple Apple
5.6 Ozi dị na ngwaọrụ niile
Gịnị bụ ihe ọhụrụ na iOS 11
iOS 11 anaghị ewetara anyị mgbanwe mgbanwe dị ukwuu, dị ka ụfọdụ isi kwuru, mana Apple ararala onwe ya nye imezi usoro izugbe nke ngwa ahụ, na-eji atụmatụ nke ngwa Apple Music na iOS 10, yana imezi otú anyị na ya si emekọ ihe.
Anyị na-eme ihe n'eziokwu amaghị ihe gafere n'uche Apple mgbe ọ bịara ịmegharị akara njikwa, a akara center na anya dị ka a ọdachi drawer ebe njikwa mbu nke nsụgharị iOS ọhụrụ dị, kamakwa yana isi ọhụụ, anyị nwere ike ịhazi ihe ndị na-egosi na ya. Naanị ihe dị mma banyere ụlọ ọrụ nchịkwa ọhụrụ a bụ na anyị na-achọta ozi niile dị na ibe ahụ na-enweghị slide site n'aka ekpe gaa n'aka nri iji kpọọ egwu ma ọ bụ rụọ igwefoto, dịka ọmụmaatụ.
Mgbe ọtụtụ afọ ịnọgide na-enwe imewe, ọzọ gbakwasara kọmputa karịa ka mobile ngwaọrụ, Apple emezigharịrị interface nke Storelọ Ahịa App, na-enye ọtụtụ ihe ọmụma na ngwa ndị metụtara ya. Ihe onyonyo na vidiyo nke ngwa na egwuregwu na-ewere ọrụ dị ukwuu na ụdị ọhụụ a, ụdị nke ekewara ụzọ ise: Taa, Egwuregwu, Ngwa, Mmelite na Ọchụchọ.
Otu aka keyboard
iOS 11 na-enye anyị ohere ị hazi kiiboodu na iPhone ka inwe ike jiri ya n’aka, ọrụ dị mma maka mgbe anyị ga-enwe mkparịta ụka mana anyị nwere aka ọ bụla n'aka
Nhọrọ iji weghara ihuenyo na iOS 11 na-enye anyị ohere ime otu ihe ahụ, dezie, akuku na ịkọrọ ya ngwa ngwa. Ozugbo anyị mere mgbanwe ma anyị kesara ya, anyị nwere ike ihichapụ ya ozugbo na ngwaọrụ anyị, ka ọ ghara iwepụta ohere na-enweghị isi.
Apple Pay na ngwa ozi
Ihe na-aghọ fashionable na-adịbeghị anya bụ ziga ndi enyi anyi ego site na ngwa di iche, dị mma maka mgbe anyị na-apụkọ ọnụ ma ọ bụ na anyị kwesịrị ịhazi nri, ụbọchị ọmụmụ maọbụ ihe ọ bụla. Apple gbasaa ohere nke Apple Pay site na ikwe ka ị ziga ego site na ngwa Ozi, ego nke doro anya na-ahapụ obere akpa anyị ahaziri na Apple Pay.
Siri natara ihe ịchọ mma mgbanwe, na interface ọhụrụ ma nwee ike igosi nsonaazụ dị iche na mgbakwunye na ịkwalite mkpọpụta. Ihe a niile dị mma na tiori, mana ihe dị mkpa bụ na Siri na-akwụsị ịzaghachi anyị ọtụtụ oge na "Nke a bụ ihe m hụrụ na ịntanetị."
Ngwa foto anatawo dị mkpa ndozi na nhazi ihe oyiyi, na-enye iji usoro H265 maka vidiyo, nke mkpakọ ya dị elu karịa usoro H264 ejiri ruo iOS 10, nke mere na ihe oyiyi na vidiyo ga-ewe obere ohere. Ọ na-enyekwa anyị ohere iwepụta onyonyo sitere na Live Photos, ọrụ nke jiri iOS 9 bịa na nke bụ ụzọ iji mepụta GIF na ụda.
N'ihi ARKit, Apple na-eme ka ndị mmepe nweta ihe ọhụụ maka jiri eziokwu dịwanye elu, nke ga - abụrụ ihe ịma aka ọhụrụ maka ndị mmepe egwuregwu mgbe ha na - eke otu egwuregwu ọhụụ.
Gịnị bụ ihe ọhụrụ na iOS nanị iPad
You nwere ike ịhụ na n'ikpeazụ ụmụ okorobịa si Cupertino achọpụtala na ọ bụrụ na ha chọrọ ka iPad bụrụ ezigbo nnọchi maka kọmputa ahụ, ga-enyerịrị ya ọrụ ndị na-enye ohere ịbawanye ụba, ihe nke taa enweghi ike ịchọta. N'etiti akwụkwọ ọhụụ iOS 11 na-eweta naanị na iPad anyị na-achọta ngwa faịlụ, nke na-enye anyị ohere ijikwa akwụkwọ igwe ojii niile anyị na-ejikarị yana faịlụ ndị anyị chekwara na iCloud.
Mana ihe kacha dị egwu bụ ụgbọ mmiri ọhụrụ ahụ, Dock, nke a na-enweta site na iji mkpịsị aka gị site na ala wee nye anyị ohere ịnweta ngwa mmeghe ikpeazụ, na mgbakwunye na ijikwa ọtụtụ ngwa ngwa, naanị site na ịdọrọ ngwa ahụ na ihuenyo ebe anyị nwere ngwa ọzọ dabara na ọrụ a. imeghe.
Dọrọ na dobe, a nnọọ ụdị atụmatụ nke desktọọpụ sistem Ọ ga-abụ dị na mbata nke iOS 11 na iPad nanị. N'ihi ọrụ a, anyị nwere ike ịkekọrịta faịlụ ọsọ ọsọ site na akwụkwọ ozi, ngwa izipu ozi…. naanị site na ịdọrọ ha site na ebe ha dị, dịka ọmụmaatụ site na ngwa Njikwa, na ngwa nke anyị chọrọ ịkekọrịta ya.
Apple Pencil kwa Nweta onye amara na ihe ọhụrụ 10,5-inch iPad Pro na sistemụ arụmọrụ ọhụrụ, na - eme ka ọ bụrụ ihe akwadoro iji nweta ọtụtụ ihe na iPad.
Ihe ohuru QuickType, na-ejikọ mkpụrụ edemede pụrụ iche na leta, nke mere na iji nweta ha ọsọ ọsọ, anyị ga-agbanye na igodo ahụ dị na ya ma wedaa mkpịsị aka gị ala.
Kedu ihe ọhụụ na watchOS 4
Ngwa mmemme nke watchOS 4 ga-enye anyị nnukwu njikọta, ọ bụghị naanị na ngosiputa mmega kamakwa yana egwu anyị na-ege mgbe anyị na-apụ maka ịgba ọsọ ma ọ bụ na-aga mgbatị ahụ. Na mgbakwunye ọ ga-elekọtakwa rna-echetara anyị na anyị ebugharịbeghị ruo ụbọchị ụfọdụ, iji nwaa ịkwali onwe anyị.
Aesthetically, ihe omumu ngwa ga-egosi anyị ugbu a nwa bebi na nke ọ bụla n'ime usoro mmega ahụ na Apple Watch nwere ike ịkọwapụta, dị mma maka ịghara ịgụ nhọrọ niile nke ngwa ahụ. Ọ na-emekwa ka anyị gbanwee usoro mmega ahụ ngwa ngwa na-enweghị ịkwụsị quan.
Mmekọrịta akpaaka na-abịa na watchOS 4, yabụ anyị nwere ike ịnwe ya na nkwojiaka anyị listi ọkpụkpọ anyị kachasị amasị na-enweghị ime ihe ọ bụla.
Ihe ngosi ọhụụ nke Siri, nke a ga-egosipụta data nke nhọpụta anyị nke ụbọchị ahụ, yana oge fọdụrụnụ ịlaghachi n'ụlọ yana ndụmọdụ ndị Siri na-ahụ dabara adaba kwa ụbọchị. Disney na-enyekwa anyị ọhụụ egwuregwu atọ ọzọ, ma ọ bụghị naanị ha, ebe Apple ga-ekwe ka anyị gbanwee ihe oyiyi dị iche iche na hypnotic kaleidoscopes nke na-agbanwe ụbọchị niile.
Ihe dị ọhụrụ na tvOS 11
Apple etinyeghị oge buru ibu na -eweta ozi ọma nke ụdị sistemụ na-esote maka Apple TV, naanị mara ọkwa na n'oge na-adịghị anya, Amazon Prime Video ga-emesị dị maka Apple TV, ngwa nke rue ugbu a abụghị, n'ihi nsogbu dị iche n'etiti Apple na Amazon, nsogbu ụfọdụ emesịrị edozi, yabụ Apple TV ga-adịkwa ọzọ maka ịzụta site na Amazon.
Kedu ihe dị ọhụrụ na macOS 10.13 High Sierra
Apple elekwasịwo anya na macOS High Sierra iji meziwanye ọrụ izugbe nke sistemu site na iji teknụzụ ọhụrụ eme ihe iji meziwanye ọrụ kachasị mkpa nke Mac, dị ka ụzọ anyị si echekwa faịlụ anyị, ike eserese, sistemu faịlụ ...
APFS - Usoro Apple Apple
Apple faịlụ sistemụ bụ sistemụ faịlụ ọhụrụ nke sitere na iOS 10.3 gaa iPhone, iPad na iPod touch. Usoro faịlụ ọhụrụ a bụ Oke ọsọ ọsọ na ọ na-enye ohere iji rụọ ọrụ ndị a na-emebu n'ụzọ dị nchebe ma na-arụ ọrụ nke ọma. Na mgbakwunye, ekele maka sistemụ arụmọrụ agbakwunyere, a na-echebe usoro anyị n'oge niile site na nsogbu ngwaike ma ọ bụ nsogbu ngwanrọ.
Apple ekpebiela iji H265 codec mee ihe, koodu nke na-enye mkpakọ mkpakọ karịa ọkwa ụlọ ọrụ, H264. Nkà na ụzụ a -enye gị ohere mpikota onu videos ruo 40% karịa ugbu a H264 ọkọlọtọ, nke ga-echekwa ohere dị egwu na-enweghị ịchụ àjà dị mma, ihe ọtụtụ ndị ọrụ na-adịghị njikere ịhapụ.
Ọganihu nke nhazi eserese nke Mac sitere n'aka nke mbipụta nke abụọ nke Metal, teknụzụ jikọtara nke na-enye ohere ngwa nweta ọtụtụ n'ime ha, ekele maka eziokwu dị adị, nkwado GPU nke mpụga, na ndị ọzọ.
A na - emelite foto site na ịgbakwunye ụfọdụ ọrụ ruo ugbu a enweghị ya na - enweghị nkwado ziri ezi. Otu n'ime ihe kacha dị ịtụnanya bụ ohere sMekọrịta niile ghọtara ihu na Mac na niile ngwaọrụ metụtara na otu akaụntụ nke mere na anyị ga-enwe ike ịchọ ndị mmadụ ngwa ngwa si anyị Mac dị ka anyị na-eme site na anyị na ngwaọrụ jisiri na iOS. Anyị nwekwara ike nyochachaa onyonyo ahụ site na njirisi, iji nwee ike ịhazi ma ọ bụ kesaa ha n'ụzọ dị oke ọsọ karịa ka ọ dị na mbụ.
Banyere idezi, ngwa foto ahụ na-enweta ọrụ ọhụụ nke ga-enyere anyị aka gbanwee ihe ndị anyị jidere na nzacha ọkachamara inye ha mmetuta anyi na-acho. Ọ na-ejikọkwa na ngwa ndị ọzọ nke mere na ọ bụrụ na onye editọ foto ahụ ezughị, anyị nwere ike mepee ha ozugbo na Photoshop ma ọ bụ Pixelmator na-enweghị ịhapụ ngwa ahụ.
Safari na-enye anyị dị ka isi ihe ọhụrụ na igbochi mgbasa ozi vidiyo, ndị na-enwe obi ụtọ na ịkpọasị vidiyo ndị na-emegharị na-akpaghị aka na ụda na nke dị ka iwu izugbe na-enye anyị ụjọ na imi yana imebi ahụmịhe nchọgharị. Safari ga - enye anyi ohere igbochi udiri mgbasa ozi a dika ochicho na mmasi anyi.
Ihe omuma di nkpa ozo bu mgbochi ọkọ usoro, iji zere nke ahụ mgbe ị na-achọ ihe na ịntanetị, ibe weebụ na-agbaso ihe anyị na-achọ na mgbasa ozi gosipụtara na webụ ndị anyị gara, na-egosi anyị ngwaahịa ma ọ bụ isiokwu ndị ahụ na-aga n'ihu.
Safari na-enyekwa anyị ohere hazie otu anyị si achọ ihu weebụsaịtị anyị na-agakarị, na-edozi ọkwa mbugharị, ma anyị chọrọ igbochi ọdịnaya, kesaa ọnọdụ ahụ ... Ọ na-enyekwa anyị ohere ịmepe ibe weebụ ozugbo na ọnọdụ Ọgụgụ, iji nwee ike ịgụ isiokwu ndị ahụ na-enweghị ihe ndọpụ uche ọ bụla.
Ozi dị na ngwaọrụ niile
Ọ bụrụ na anyị na-eji Mac ma ọ bụ iPhone eme ihe mgbe niile iji zipu ozi, ekele maka macOS High Sierra, a ga-echekwa ozi niile anyị zigara na iCloud iji gaa n'ihu mkparịta ụka na ngwaọrụ ọhụrụ anyị jikọtara na NJ anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Akụkọ niile dị na iOS 11, tvOS 11, watchOS 4 na macOS High Sierra
Esi tọgharịa Apple Watch na ntọala ụlọ ọrụ ma ọ bụrụ na echefuru koodu mkpọghe